ओली ज्यु ! काँग्रेसलाइ उफ्रीउफ्री गाली गर्ने तपाईको त्यो जिव्रो त्यही काँग्रेसले नै बचाएको होइन ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
ओली ज्यु ! काँग्रेसलाइ उफ्रीउफ्री गाली गर्ने तपाईको त्यो जिव्रो त्यही काँग्रेसले नै बचाएको होइन ?
चुनावको माहोल छ। राजनैतीक दल तथा त्यीनका नेताहरु आफ्ना सवल पक्ष र विपक्षीका कमजोर पक्षलाई जनतामा सुसुचित गरेर आफ्नो पक्षमा मतको अपिल गर्ने कुरा लोकतन्त्र र निर्वाचनको शुन्दर पक्ष हो। लोकतान्त्रीक ब्याबस्थामा हाम्रो ईतिहास छोटो भएरै हुनुपर्छ हाम्रा राजनैतीक दल र त्यीनका नेताहरु निर्वाचनको समयमा चरम धुव्रीकृत हुने गरेको पाईन्छ ।
त्यसमा पनि मङसीरमा सम्पन्न हुन गईरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशका वामपन्थी शक्तिहरुको एकता र त्यसपश्यात नेपाली काङग्रेसले केही ठाउमा बनाएको लोकतान्त्रीक गठबन्धन पछि अहिले नेपाली राजनीतीको धुव्रीकरण हेर्न लायक बनेको छ। नेपाल लामो संघर्ष र बलिदानि पछि प्राप्त गरेका जनअधिकारको रक्षार्थ संविधान कार्यान्वन र समृद्धीको यात्रामा अगाडी बढिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका तत्कालीक प्रमुख मुद्धा तिन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हुन। जस मध्य अहिले प्रेदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुने क्रममा छ।
स्थानिय निर्वाचनका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष्य केपि सर्मा ओली खासगरि माओवादी केन्द्र र नेपाली काङग्रेसको गठबन्धन सरकार र चुनावी तालमेलका विषयमा निकै आक्रामक बने । त्यसो त विषक्षी लाई मर्म नै पुग्ने गरि अभिब्याक्ती दिएर मासलाई तताउन खप्पीस छन ओली । काङग्रेस सँगको गठबन्धनबाट माओवादीलाई रिङ आउट गरि आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बनाउन रणनैतिक सफलता प्राप्त गरेपछि ओलीका अभिब्याक्ती पछिल्लो समयका चुनावी कार्यक्रमहरुमा काङग्रेस विरुद्ध निकै छुद्र हुने गरेको पाईन्छ।
लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ। यसमा दुईमत भएन। तर केपि सर्मा ओलीले काङग्रेस र सभापती देउवा प्रति लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय का शन्दर्भमा जुन आरोपहरु लगाए त्यी औचीत्यहिन र निकै ब्याक्तिगत रहेका छन्। उनले देशको वाहालवाला प्रधानमन्त्री प्रती प्रयोग गरेका शब्द निकै तल्लोस्तरका छन्। किनकि ओली राष्ट्रिय स्तरको नेता भएकोले उनले बोल्ने हरेक अभिब्याक्ती न्यायोचीत हुनुपर्छ। कार्याकर्तालाई उत्साहीत पार्नकै लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले विट बाहीर गएर बोल्नु पक्कै पनि राम्रो होईन्। तर ओलीका बोलीहरु निकै कमजोर धरातलमा रह। काङग्रेस र त्यीनका नेताहरुले देशमा जनअधिकारको रक्षा र निरङकुशता विरुद्धमा गरेको त्याग तपश्या र योगदानको अगाडी नेकपा एमाले र ओलीको तुलना हुनै सक्दैन।
जब दक्षिण एसियामा जनअधिकारको बहस सुरु भयो त्यती बेला नेपालमा नेपाली काङग्रेसले जाहानिय राणा शासनका विरुद्धमा आफ्नो क्रान्ति जारि राखि सकेको थियो। समकालीन समयमा विश्वका विभिन्न देशहरुमा जनअधिकारका आन्दोलहरु चलीरहदा नेपालमा पनि जनअधिकारको आन्दोलनलाई नेपाली काङग्रेसले अग्रता दिईसकेको थियो। चाहे ७ साल होस चाहे ४६ साल होस चाहे ०६२ साल होस नेपाली काङग्रेसले लोकतन्त्र र नेपाली जनताको निम्ति अतुलनिय योगदान दिएको छ। यहि लोकतन्त्रकै निम्ति नेपाली काङग्रेसका धेरै नेता कायकर्र्ताहरुले ठुलो त्याग र तपश्या गरेका छन्। नेकपा एमालेले ४६ पछिका आन्दोलहरुमा काङगे्रस नेतृत्वमा लोकतन्त्रका निम्ति गरेको योगदानलाई उपेक्षा गर्नु उप्रतीको अन्याय हुन्छ।
तर जसरी बहुदल ४६ सालको आन्दोलन गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज थियो त्यो भन्दा कैयौ अप्ठेरा चुनौतीहरु राणा विरुद्ध र १८ सालको आन्दोलन मा थियो। जुन नेपाली काङग्रेसले एक्लै हाकेको थियो । त्यसमा अहिले काङग्रेसलाई लोकतन्त्र सिकाउदै हिडेर लोकतन्त्रका गुरु बन्न खोजेका ओलीहरुको कुनै अस्थित्व थिएन। हुन सक्छ नेपाली काङग्रसले यो लामो यात्रामा केही कमजोरीहरु गरे होला। जनताले चाहे बमजीम आर्थीक समृद्धीको यात्रा अगाडी बढ्न सकेको छैन होला तर ओलीले जसरी काँग्रेस र त्यीनका नेताहरुले लोकतन्त्रको लागि गरेको योगदानलाई अबमुल्यन गर्दै काँग्रेस पार्टीलाई कवाडी संग तुलना गर्दै हिडेका छन्।
त्यो उनको दम्ब र उन्माद हो। एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताले माईक पाउदा वित्तिकै विपक्षी पार्टीका नेतहरुलाई ब्याक्तिगत रुपमै अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्नु असोभनिय कार्य हो। त्यसबाट राजनैतीक संस्कार र प्रबृतीको गम्भिर स्खलन हुने खतरा बढेर जाने प्रष्ट छ। आज आफ्ना अभिब्याक्तिहरुलाई प्रष्ट रुपमा राख्न असमर्थ हुन विबस सेर बहादुहरु त्यीनै हुन जसले जनताको बोल्न पाउने अधिकारको निम्ती निरङकुश राज्यको चरम यातानाबाट आफ्नो जिब्रोमा क्षती ब्यहोर्नु परेको थियो। सायद आज नेपाली काङग्रेस र त्यीनै सेर बहादुरहरु हुदैनथे भने वलीले यसरी जनतामाझ गएर भोट माग्ने भाग्य प्राप्त गर्ने थिएनन् होला।
सायदै वलीले जनताको छोराको हैसियतमा देश सञ्चालनको सौभाग्य प्राप्त गर्ने थिएनन् होला। बाग रुपि राणा शासन र चितुवारुपि पञ्चायतलाई प्राश्त गरेको नेपाली काङग्रेसले विरालो रुपि संबैधानिक राजतन्त्रलाई एमालेको साथ नभएको भए पनि अन्त्य गर्ने सामार्थ राख्न सक्थ्यो। त्यसकारण वलीलाई सुझाव यो छ कि तपाई जनतामाझ गएर आफ्ना योजना र आर्थीक समृद्धी प्रतीका तपाईका प्रतिबद्धताहरु राखेर मत माग्नुहोस । तपाईले विपक्षीलाई आधारहीन गाली गर्र्लाैज गरेर कस्तो किसिमको राजनैतीक संस्कारको निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? कुनै बेला प्रचण्डका भाषण र अभिब्यात्तीहरु उत्तेजित हुने गर्थे र कार्यकर्ताहरुमा पनि त्यसको प्रभाव परेको थियो। सो समयमा तपाईले माओबादीलाई गुरिल्लाको संज्ञा दिनुहुन्थ्यो। अहिले आफ्ना भाषण र अभिब्यात्ती कस्ता छन्? मुल्याङकन गर्नु भएको छ?
सभ्य तरिकाले दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुहोस । तपाई यो नबिर्सीनुहोस कि शेर बहादरलाई उफ्र्री उफ्र्री गाली गर्ने तपाईको त्यो जिब्रो त्यीनै सेर बहादुरहरुले निरङकुशता विरुद्ध आफ्नो जिब्रो गुमाएकैले बचेको थियो।यदि देशमा कांग्रेसले निरङकुस शासनको अन्त्य नगरेको भए सायद अधिकारको लागि बोल्ने धेरै जिब्राहरुमा करेन्ट लाग्ने थिए।